Ingcweti ku-Size Plus "Izidingo & Umnumzane Omkhulu" - uPalermo
Ukuthenga kubo bonke osayizi.
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-19)
Uchwepheshe Wosayizi We-Plus, "Izidingo Nomphathi Omkhulu" kungukuthi I-Hypermated Clothing Hypermarket kusekwe a Palermo, e Via Giovanni Aurispa, 12/14, ihlinzekiwe futhi ivuselelwa kuthrendi yakamuva. Izikhala Ezinkulu, osayizi abakhulu kanye namanani amancane we Indoda nowesifazane.
Uchwepheshe Wosayizi we-Plus "Needs & Mister Big" - Izembatho Ezilinganiselwe Zabesilisa Nabesifazane
Osayizi abaningi nezingubo zokulinganisa ngumkhakha lapho usebenza kuwo "Izidingo Nomphathi Omkhulu" a Palermo lapho kubukeka khona njengokwangempela Izingubo Hypermarket. Osayizi abaningi abesilisa nabesifazane zimelela ukuqina kwalokhu, okuhambisana nokuhlonishwa okuningi okugcwele futhi okugcwele kahle Izinhloko e Izesekeli. Into ngayinye iyakhethwa futhi iphathwe ukuqinisekisa ukukhetha okubanzi Izingubo futhi uqedele, ohlanganisa ikhwalithi nokulula futhi uvumelane nezidingo zonke. Zonke Izibonda, lezo Forti okokuqala kuyizinto okufanele Izidingo & Mister Big okunikezwayo, kanye Izingubo ezilinganisiwe, futhi nenqubo ephelele ye I-Calzature ed Ukusondelana. Mnumzane Big inikeza izindatshana ezisusela ku-S kuye ku 10 XL: kokubili esitolo naku-inthanethi futhi uzothola zonke izinhlobo Izesekeli zemfashini ukuqeda okwakho Izingubo, dal Casual konke 'stylish, kunjalo ngosayizi owuthandayo.
Uchwepheshe Kamasayizi Wokuhlanganisa "Izidingo Nomphathi Omkhulu" - Usayizi osuka ku-40 kuye ku-94
Uchwepheshe ku Izibonda Forti e Izingubo ezilinganisiwe, Mnumzane Big wazalwa eduzane nasePalermo ngonyaka we-1980 kanti kusukela lapho wagqoka izizukulwane zikaPalermo nabangewona uPalermo. Isitolo esiseduze se "Izidingo" Nezinhlamvu Eziningi, esikhundleni salokho, ubona ukukhanya ngonyaka we-1990 futhi uqedela ukuqoqwa kwe Mnumzane Big, engeza amakhulukhulu weziphakamiso ezinikezelwe abesifazane bezingane abahlose ukuthuthukisa amafomu abo. Isitolo Izidingo Zesayizi KaMister Big & Plus di Palermo ihlanganisa nendawo yokubukisa nesitolo esisebenzayo se-inthanethi lapho ungabuka khona yonke into eyodwa futhi uyithenge kusuka kunethezeka lekhaya lakho. Izidingo & Mnumzane Big Iqinisekisa okunhlobonhlobo kwe Izingubo zabesilisa nabesifazane wabo bonke osayizi Izingubo Zokugqoka Ezinkulu 40 kuya ku-94 libhekwe ngekhwalithi futhi kube lula, kukhethwa ukuthi kuqinisekiswe ukugcwaliseka okungu-100% kwikhasimende ngalinye Imfashini, Amathrendi kanye ne-assortment enkulu: Izidingo & Mister Big ihlangabezana nakho konke ukunambitheka nezidingo zamakhasimende, ukunaka ngokukhethekileIzingubo ezilinganisiwe inqabile kuzo zonke izinhlobo zezingubo nakuzo zonke izinkambiso zesikhathi futhi ihambisana nokukhethwa okubanzi kwezesekeli.
Izembatho Zendoda Yomuntu Wokugqoka & Mister Big - Plus Size Tailoring
Indoda Yengubo "Izidingo & Mister Big" iyindawo yezitolo yangempela enikezelwe kumakhasimende Amasayizi amakhulu, ngenxa yesabelo esicebile nesimfashini sezambatho zawo wonke amasayizi aze afike ku-94. Yonke into yakhelwe futhi yafundelwa ukunakekelwa kwamakhasimende: Izidingo & Mister Big inikeza insiza elenzelwe ukuthandwa nguwe ngengubo ngayinye ngenxa yensizakalo enempilo nefanele ukuvumelanisa ngaphakathi. Ngaphezu kwalokho i indawo yokupaka akuyona inkinga, sibonga inhlangano yezikhala ezinkulu hhayi nje kuphela kodwa nangaphandle. Relax, Assortment, Izingubo ezilinganisiwe: sibonga u Izidingo & Mister Big ePalermo ukuthenga nokuthenga yinto emnandi kuwo wonke umuntu.
Izidingo Zokulinganiswa Kwezingubo Zomuntu Wesifazane & Mister Big ePalermo - Ukuthengwa kwawo Wonke umuntu
Izidingo & Mister Big, e Via Giovanni Aurispa, 12/14 a Palermo, a Izingubo zokugqoka Kunikezelwe wonke umuntu: Izingubo Zabesilisa Nezabesifazane, Izingubo Ezilungisiwe nangawo wonke osayizi nangaphezulu kwawo wonke amakhwalithi amahle futhi ahlukahlukene egameni lokusebenziseka kalula. Konke kusuka Izidingo & Mister Big kuyinto emnandi futhi eyanelisayo yezitolo isipiliyoni, ngokuqala ngendawo enkulu yokupaka nokuphela kwensiza yokwenza izinto komuntu uqobo nge Isevisa insiza ngaphakathi kwesakhiwo. Isitolo sinikela ngamaqoqo angenakuqhathaniswa ngezikhathi ezibalulekile, kodwa futhi izingubo ezejwayelekile nezemidlalo, ilungele ukuyela emsebenzini noma kwezemidlalo. Abasebenzi bazogada ukululeka ngendlela engcono kakhulu ngokususa isithiyo esivezwe ukuswelakala kwe osayizi abakhulu. Noma ngabe ungusayizi 40 noma usayizi 94, Indoda noma Owesifazane, uzothola ngaphandle kobunzima okulungile kuwe ku-assortment enkulu Izembatho Zilinganiswe Izidingo & Mister Big.
Ikheli: IVia Giovanni Aurispa, 12/14
I-POSTAL CODE: 90145
Ucingo: 091 6829403
Inombolo ye-VAT: 06343810823